ဒီအမှုဟာ ထူးခြားတဲ့အမှုဖြစ်တယ် – Nyang Media
ငြမ်း / အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဆိုသည့် ကျောင်း
တရားလိုဘက်က အမှုဖွင့်ကတည်းက ရှေ့နေ ငှားပြီး သား။ တရားလိုဘက်က ရှေ့နေပါတဲ့အကြောင်း ရှေ့နေဓာတ်ပုံနဲ့တကွ လူမှုကွန်ရက် တင်ထားတဲ့ အမှု ဖြစ်တယ်။ အမှုက လောလောဆယ် ပြောရရင် …
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းလှမြို့နယ်၊ ဆားတောင်ကျေးရွာ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲတွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည် ဟုဆိုသော သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ဖြစ်စဉ်အတွက် စွပ်စွပ်ခံရသူ ဦးအောင်ဆန်း ဘက်မှ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးမောင်မောင်စိုးကို ငြမ်းမီဒီယာက မင်းလှရှိ ၎င်း၏ နေအိမ်တွင် သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်း ထားပါသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဆားတောင်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု အခြေအနေကို သိချင်ပါတယ်။ ရုံးချိန်း ဘယ်လောက် ရှိပြီ၊ သက်သေ ဘယ်နှယောက်ကို စစ်ဆေးပြီးပြီလဲ သိချင်ပါ တယ်။
UMMS – ဒီအမှုကတော့ ထူးခြားတဲ့အမှုပါ။ တရားလိုဘက်က အမှုဖွင့်ကတည်းက ရှေ့နေ ငှားပြီး သား။ တရားလိုဘက်က ရှေ့နေပါတဲ့အကြောင်း ရှေ့နေဓာတ်ပုံနဲ့တကွ လူမှုကွန်ရက် တင်ထားတဲ့ အမှု ဖြစ်တယ်။ အမှုက လောလောဆယ် ပြောရရင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် ရာဇဝတ်အထွေထွေ လျှောက်လွှာအမှတ် (၂၈/၂၀၁၈) မှာ ရုံးပြောင်း လျှောက်ထားပြီး တော့ အမှုကို (၁၃ . ၂ . ၂၀၁၉) က ကြားနာပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ (၂၈ . ၂ . ၂၀၁၉) အထိ အမိန့်မချသေးပါဘူး။ အမှုအနေအထား အရတော့ တရားလိုက သက်သေ တစ်ဝက်လောက်ကို ပယ်ပါတယ်။ ကြိုတင် ထွက်ချက်ယူတဲ့ တရားသူကြီးရယ်၊ ဆရာဝန်ရယ်၊ အမှုစစ်ရယ် သုံးယောက်ပဲ စစ်ဆေးဖို့ ကျန်ပါတော့ တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရုံးပြောင်းလျှောက်ကတည်းက အမှုကို ရောက်ရှိတဲ့ အဆင့်ကနေ ဆက်ပြီး စစ်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်လို့ ထည့်သွင်းပြီးတော့ လျှေက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲတဲ့ ရက်ကနေ ပြန်ရေတွက်ရင် တစ်နှစ်ကျော် ကြာလာပါပြီ။ ဘာကြောင့် ကြန့်ကြာနေတယ် ဆိုတာကို သိပါရစေ။
UMMS – အမှုက တရားစွဲပြီးတော့ (၂၈ . ၂ . ၂၀၁၈) ရက်နေ့မှာ တရားစွဲပြီးတော့ တရားလို ကိုယ်တိုင်က တစ်လကျော်ကျော်မှ ရုံးကိုလာပါတယ်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ကို ရဲစက္ကူ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခွင့်ရဖို့ ပြင်ဆင်မှု တက်တာရယ်၊ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်တက်တာရယ် တစ်လကျော် ကြာပါတယ်။ နေပြည်တော်က ရာဇဝတ် ပြင်ဆင်မှု အမှတ် ၄၇၄ (ခ) ၂၀၁၈ ကို (၁၄ . ၅ . ၂၀၁၈) မှာ တင်တယ်။ လက်ခံတယ်။ တရားလိုဘက်ကို ဆင့်စာပို့တယ် ကြန့်ကြာနေတယ်။
သက်သေတစ်ယောက်ကို စစ်တဲ့အခါမှာ ရုံးမေးတွေက တရားခံကို သေချာပေါက် ပြစ်မှုကျူးလွန် ထားတဲ့ တရားခံလို့ ယူဆတဲ့ မေးခွန်း မျိုးတွေ မှတ်တမ်းတင်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် …
ဘယ်သူမှ မလာဘူး။ အဲဒါကြောင့် (၁၈ . ၉ . ၂၀၁၈) ရက်နေ့မှာ အမိန့်ချတယ်။ လေးလခန့်ကြာသွားပါတယ်။ တစ်ခါ (၁၈ . ၁၂ . ၂၀၁၈) မှာ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် ရာဇဝတ် အထွေထွေ လျှောက်လွှာ ၂၈/၂၀၁၈ တင်ပါတယ်။ တရားလို ဘက်ကို ဆင့်စာပို့ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ မလာပါဘူး။ ဒါကြောင့် (၁၃ . ၂ . ၂၀၁၉) ရက်နေ့မှာ တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်မှာ လျှောက်လဲချက် ပေးပြီးပါပြီ။ ယနေ့ (၂၈ . ၂ . ၂၀၁၉) ထိ အမိန့်မချသေးပါဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – ရဲစက္ကူရဖို့ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်မှာ ဘာကြောင့် အရေးတကြီး လျှောက်ထား တောင်းယူ ရတာလဲ။
UMMS – ရဲစက္ကူ တောင်းဆိုရတာက အမှုက မစခင်ကတည်းက ရှေ့နေပါတယ်။ ရုံးရှေ့မှာ တရားလိုက ပိုထွက်နေတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပိုထွက်နေတယ်လို့ ခန့်မှန်းယူဆလို့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရဲစက္ကူနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှ အမှန် တရား ပေါ်ပေါက်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဥပဒေ အခွင့်အရေး ပေးထားတဲ့ အတွက် ဥပဒေအခွင့်အရေးအရ တောင်းခံတာပါ။
တရားခံဘက် အနေနဲ့ကတော့ သက်သေရုံးရှေ့ရောက်တာနဲ့ မစစ်ဆေးတဲ့ ရုံးချိန်းရယ်လို့တော့ လုံးဝမရှိဘူး။ တရားခံဘက်က ခွင့်တိုင်တဲ့ရုံးချိန်း လုံးဝမရှိဘူး။ ကြန့်ကြာအောင် လုပ်တာလည်း ဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ တရားခံဘက်ကတော့ ဥပဒေ …
ငြမ်းမီဒီယာ – ရဲစခန်းမှာ ထွက်ဆိုတဲ့ ထွက်ချက်တွေက တရားရုံးမှာ အကျုံးမဝင်ဘူးလို့ သိထားတော့ ဘာကြောင့်များ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးဖို့ တောင်းရတာလဲ။
UMMS – သက်သေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၅ တို့၊ ၁၅၅ တို့ အရ သက်သေက ရဲမှာထွက်တုန်းက တစ်မျိုး၊ ရုံးမှာ ထွက်တာ တစ်မျိုးဆိုရင် သက်သေက ယုံထိုက် မယုံထိုက် ချင့်ချိန်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ဒီအခွင့်အရေးကို တောင်းရတာပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – အမှုရုံးချိန်းတွေ ကြန့်ကြာလာတဲ့အတွက် တရားလိုတွေ ဘက်မှာ အခက်အခဲတွေ ကြုံရသလို ကောင်မလေးက အသက်ကြီး လာတဲ့အတွက် အခက်အခဲတွေ ရှိလာတယ်။ သွားရေးလာရေး က အစ ခက်ခဲတယ်လို့ ပြောဆိုမှုအတွက် ဥပဒေ ပညာရှင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘာပြောချင်လဲ။
UMMS – အချိန့်ကြန့်ကြာတာက တရားလိုဘက်က သက်သေတွေ စစ်ဆေးနေတုန်း ဘယ်သက်သေ တွေကို စစ်ပါမယ်၊ ဘယ် သက်သေ တွေကို ပယ်ပါမယ်လို့ ကြိုတင်ပြတာ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် လည်း ကြန့်ကြာတာ ပါတယ်။ တရားခံဘက် အနေနဲ့ကတော့ သက်သေရုံးရှေ့ရောက်တာနဲ့ မစစ်ဆေးတဲ့ ရုံးချိန်းရယ်လို့တော့ လုံးဝမရှိဘူး။ တရားခံဘက်က ခွင့်တိုင်တဲ့ရုံးချိန်း လုံးဝမရှိဘူး။ ကြန့်ကြာအောင် လုပ်တာလည်း ဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ တရားခံဘက်ကတော့ ဥပဒေကပေးတဲ့ အခွင့်အရေးကို မဆုံးရံှုးရ အောင် ဆောင်ရွက်တာပဲ ရှိတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒီအမှု ကြာနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူအများကြားမှာလည်း ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေ ရှိလာတဲ့အတွက် စွပ်စွဲခံရသူရဲ့ ရှေ့နေ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘာတွေများ ပြောလိုပါသလဲ။
UMMS – အားလုံးလည်း ပိုအဆင်ပြေသွားအောင် ဒီအမှုမျိုး စစ်ဆေးရတာကလည်း ခရိုင်တရားရုံး ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင့်ဆင့် သော ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ အုပ်ချုပ်ရတဲ့ တိုင်းအဆင့်နဲ့နီးတဲ့ ခရိုင်ရုံးမှာ စစ်ဆေးရရင်တော့ ပိုပြီးတော့ မြန်ဆန်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – သရက်ခရိုင်တရားရုံးကနေ ရုံးပြောင်းစစ်ဆေးဖို့ လျှောက်ထားတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လို အခြေ အနေကြောင့်များ ရုံးပြောင်းလျှောက်ရတာလဲ။
UMMS – ရုံးပြောင်းလျှောက်ထားတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အချက် (၂) ချက်နဲ့ လျှောက်ထား ပါ တယ်။ ပထမအချက် ကတော့ ရဲစက္ကူကို ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ဥပဒေနဲ့အညီ ထုတ်ပေးပြီး တော့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခွင့် ပြုပါလို့ ခွင့်ပြုထား ပေမယ့် အမှုစစ်ရုံးက ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရဲ့ အမိန့်အတိုင်း မလိုက်နာတဲ့ အတွက် ရုံးပြောင်းလျှောက်ထားရ ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က သက်သေတစ်ယောက်ကို စစ်တဲ့အခါမှာ ရုံးမေးတွေက တရားခံကို သေချာပေါက် ပြစ်မှုကျူးလွန် ထားတဲ့ တရားခံလို့ ယူဆတဲ့ မေးခွန်း မျိုးတွေ မှတ်တမ်းတင်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ရုံးပြောင်း လျှောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: ကျောင်းသူ, တရားစီရင်ရေး, တရားရုံး, မကွေတိုင်း, သက်ငယ်မုဒိမ်း
ဒီတိုင်းပြည်မှာ အခွင့်ထူးခံနေတာ Institution တစ်ခုတည်းရှိတယ်